ယေရှု နှစ်ခြင်းခံရာ ဂျော်ဒန်မြစ်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ယေရှု နှစ်ခြင်းခံရာ ဂျော်ဒန်မြစ်…
Posted by hmee on Dec 13, 2011 in Creative Writing, Travel | 19 comments
ဘေးနှစ်ဖက်က ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးပါ။ အမျိုးသမီးက နှစ်ခြင်းခံမှာပါ။ နှစ်ခြင်းခံနေတဲ့ ပုံတွေက ကျွန်မရိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ စပ်စုချင်စိတ်များပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ သတိမရလို့ သတိတ၇ ဓါတ်ပုံရိုက်လိုက်တဲ့ အစ်ကိုလိုခင်တဲ့ သူဆီက တောင်းထားတာပါ။
ဂါလီလီရေကန် ကမ်းစပ်က ငါးတွေဖမ်းတဲ့နေရာမှာ ရှိတဲ့ ဘုရားကျောင်း။
ဘာသာစကားမျိုးစုံနဲ့ ရေးထားတဲ့ နှစ်ခြင်းခံခြင်းအကြောင်း စာပိုဒ်လေး။ တရုပ်၊ ဂျပန်စာရောတွေ့ပါရဲ့။
ဂျုတီဖရီးဆိုင် နံရံက နှစ်ခြင်းခံနေတဲ့ပုံလေးကို သဘောကျလို့ရိုက်လာတာ။
ဂျော်ဒန်မြစ်ပါ။ ဟိုး…လက်ယာဘက်က အဖြူတန်းလေးက တမံတုတ်ထားတာလေးပါ။
ဂျုတီဖရီးဆိုင်ကို ဂျောဒန်မြစ်ကမ်းဖက်က ရိုက်ထားတာ။
ကျွန်မတို့တွေ ဂါလီလီရေအိုင်ဘက်ကို ခရီးထွက်ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကျွန်မလည်း ကင်မရာကို အိတ်ထဲသေချာ မမေ့မလျှော့ထည့် စာအုပ်တအုပ်နဲ့ ဘော့ပ်င်ပါ မကျန်စေရ ၀ိရီယတွေ ကောင်းနေပါတယ်။ ငယ်တုန်းက သမိုင်းမှာ သင်ခဲ့၇တဲ့ ဂါလီလီေ၇အိုင် နောက် စာအုပ်တွေမှာ ဖတ်ရတဲ့ အစ္စရေးစစ်ပွဲတွေထဲက ဆီးရီးယားနယ်စပ်ပါ ရောက်ရင်ရောက်မယ်လို့ လိုက်ပို့တဲ့ အစ်ကိုကြီးက ပြောလို့ ရင်တွေခုန်ပေါ့။ ခရီးကတော့ တော်တော်ဝေးပါတယ်။ တောင်ကုန်းထိပ်တနေရာရောက်တော့ အဲ့ဒါ ဂါလီလီရေအိုင်လို့ လှမ်းပြလို့ ကားပေါ်ကနေ ကမန်းကတမ်း လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ရေပြင်ပြာပြာကို လှမ်းမြင်ရတယ်။ အော်…ဒီရေအိုင်ကနေ အစ္စရေးတနိုင်ငံလုံးကို သုံးရေ ပေးတာပါလားလို့ တွေးလိုက်မိသေးတယ်။ တဖက်မှာတော့ ဂိုလန်ကုန်းမြင့်။ နွေဦးရာသီမို့ အ၀ါရောင်ပန်းတွေ အလှခြင်းပြိုင်နေတာများ ဂိုလန်ကုန်းမြင့်တခုလုံး အ၀ါရောင်လွှမ်းလို့။ ဂါလီလီရေအိုင်ဟာ အကျယ် ၅မိုင်ရှိပြီး အရှည် ၁၃မိုင်ရှည်ပါတယ်။ ပထမဆုံး မြို့ထဲဝင် လျှောက်ကြည့်။ နောက်တော့ မြို့ထဲကပြန်ထွက် ဘုရားကျောင်းတခုကိုေ၇ာက်ခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားဖူးကားတွေလည်း တွေ့ပါတယ်။ ကျောင်းဝင်းထဲ ၀င်လိုက်တဲ့အခါ တလမ်းလုံး ပူပြင်းသမျှ အေးမြသွားသလိုခံစားရပါတယ်။ သစ်ပင်တွေလည်း စိမ်းစိုလို့။ အစ္စရေးတနိုင်ငံလုံး ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့် အပင်မရှိ ပူပြင်းသမျှ ဂါလီလီရောက်မှ မြင်မြင်သမျှ စိမ်းစိုနေတာပါပဲ။ နောက်တော့မှ သိလိုက်ရတာက အခုဘုရားကျောင်းက ယေရှုကို တံငါသည်တွေက ငါးနှစ်ကောင်ပဲ မိလို့ လူအများကြီး ဘယ်လိုကျွေးရမလဲ လာမေးတော့ ယေရှုက ပြန်သွားကြည့်ပါဦး ခိုင်းလို့ ပြန်သွားတော့ ငါးတွေ အများကြီး ဖြစ်နေတဲ့ နေရာတဲ့။ ကမ်းစပ်မှာ တည်ထားတဲ့ ဘုရားကျောင်းလေးပါ။ ကျောင်းဘေးကနေ ရေထဲဆင်း ကြည့်လို့ရပါတယ်။
အဲ့ကျောင်းက ပြန်ထွက်လာတော့ ကားကို အရှေ့ဘက် ဂိုလန်ကုန်းမြင့်ဘက် ဦးတည်လိုက်ပါတယ်။ ယေရှု ကားစင်တင် မခံရမှီအထိ တလျှောက်လုံး နေခဲ့တဲ့ ဘုရားကျောင်းကိုတော့ အဝေးကပဲ လှမ်းမြင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဘာလို့လဲတော့မသိ ပိတ်ထားလို့ ၀င်ခွင့်မရခဲ့တာပါ။ ကုန်းမြင့်တလျှောက် ကားမောင်းလာတော့ အောက်ဖက်မှာ ဂါလီလီေ၇အိုင်။ ဂါလီလီကန်တပတ် ဖေါက်ထားတဲ့ ကားလမ်းအတိုင်း ကန်တပတ်ကို မောင်းပြီး လိုက်ကြည့်ကြတာပါ။ အာရပ် အစ္စရေး စစ်ပွဲတုန်းက ဆီးရီးယားဆီက သိမ်းထားတဲ့ နေရာတွေဘက် ရောက်သွားတော့ ကျွန်မစိတ်ထဲ စစ်တလင်းပြင်ထဲ ရောက်သွားသလို ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ အပျက်အစီးတွေကို လုံးဝ မပြင်ထားပါဘူး။ ဘုရားကျောင်း အပြိုအပျက်တွေ ၊ ကတုတ်ကျင်းနေရာတွေ၊ မိုင်းကွင်းတွေ၊ တင့်ကားအပျက် ကားအပျက် အိုး…..အစုံပါပဲ။ သံဆူးကြိုးတွေ ကာထားပြီး မိုင်းသတိပေး စာတွေလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဓါတ်ပုံရိုက်ခွင့် တားမြစ်ထားပါတယ်။ ဆီးရီးယားမြေမို့ အစ္စရေးတွေကို အတည်တကျ နေထိုင်ခွင့် ကုလသမဂ္ဂက ခွင့်မပြုလို့ တကယ့် သဘာဝမြေပြင်ကျယ်ကြီးပါပဲ။ လမ်းတလျှောက် တမေ့တမောကြည့်လာရင်း ကားက တောင်ကုန်းကနေ တဖြည်းဖြည်း အနိမ့်ဖက်ဆင်းလာတော့ ဟိုးအောက်ဖက်မှာ ဂါလီလီရေပြင်။ အံ့သြဖွယ်ရာ တောင်ကြီးက အလယ်ကနေ နှစ်ခြမ်းကွဲပြီး ပြတ်ရွေ့ဖြစ်နေတာလည်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဂါလီလီ ကမ်းစပ်ဖက်ပြန်ရောက်တော့ ဌက်ပျောစိုက်ခင်းကိုလည်း အံ့သြစရာ တွေ့ရပြန်ရော။ လမ်းဘေး ၀ဲ၊ယာ နှစ်ဖက်လုံးမှာရှိတဲ့ ဌက်ပျောခင်းတွေဟာ တမျှော်တခေါ်ပါ။ အားလုံးကို အမိုးတွေ မိုးထားတာများ ခြင်ထောင် ထောင်ထားတာနဲ့တူပါတယ်။ ဌက်ပျောခင်းခြင်ထောင်ပေါ့။ ဌက်ပျောပင်က ဌက်ပျောခိုင်တွေ အားလုံးကိုလည်း အပြာရောင်အိတ်တွေနဲ့ ထုတ်လျှက်သား။ ကျွန်မတို့ဆီတော့ ဌက်ပျောဆိုတာ ဒီအတိုင်း စိုက်ထားတာကိုး ဒီမှာတော့ တယုတရ။
နောက်တော့ ကားဟာ တံတားအသေးလေးကို ဖြတ်တော့ လိုက်ပို့တဲ့ အကိုကြီးက ဂျော်ဒန်မြစ်လို့ ပြောပြပါတယ်။ ကျွန်မအတွက်တော့ ဒါဟာ မြစ်မှမဟုတ်တာ ကျွန်မတို့ အညာက ရိုးသာသာရယ်လေ။ ပတ်ပတ်လည်မှာ သံလွင်ပင်တွေ ခြံရံထားတဲ့ ကားရပ်နားတဲ့ နေရာမှာ ကားရပ်ပြီး အားလုံးဆင်းမှ သိလိုက်ရတာက ယေရှုနှစ်ခြင်းခံရာ နေရာပါတဲ့။ ဘုရားဖူးကားတွေမှ အများကြီးပါပဲ။ နိုင်ငံအနှံက လူတွေမို့ အသားရောင် အစုံပါပဲ။ အထဲကို ၀င်ဝင်ခြင်း ဂျုတီဖရီးဆိုင်။ ပစ္စည်းတွေမှ စုံလို့။ တဖက်ထွက်ပေါက်ကနေ ထွက်လိုက်တော့ ဂျော်ဒန်မြစ်ကမ်း။ ရေထဲကို ဆင်းစရာ လှေကားတွေက သပ်သပ်ရပ်ရပ်။ နောက် နှစ်ခြင်းခံမဲ့သူတွေ တန်းစီနေတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ရောက်သွားတော့ နေလည်းစောင်းနေပြီမို့ လူတွေ တော်တော်များပါတယ်။ နှစ်ခြင်းခံမဲ့သူတွေ အားလုံး ၀တ်စုံအဖြူ ဆင်တူ ၀တ်ပြီး စောင့်နေကြတာပါ။ အဲ့ဒီဝတ်စုံကို ဂျုတီဖရီးဆိုင်မှာ ရောင်းနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်မလည်း နှစ်ခြင်းခံတယ်ဆိုတာ ကြားဖူး၊ ဖတ်ဖူးပေမဲ့ တခါဆို တခါမှ မမြင်ဖူးတော့ အရမ်းကို စိတ်ဝင်စားမိတာပေါ့။ ခဏကြာတော့ ဘုန်းကြီး နှစ်ပါး ရေထဲဆင်းလာပြီး မျက်နှာခြင်းဆိုင် ရပ်လိုက်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး နှစ်ခြင်းခံမဲ့ အမျိုးသမီးကို ဘုန်းကြီးတပါးကနောက်ကျောဖက်ကနေ ပခုံးကို ကိုင်ထားပြီး နောက်တဖက်က နဖူးနေရာကို လက်ဝါးတင်ထားပါတယ်။ နောက်တပါးကတော့ လက်မောင်းနဲ့ ကျောကို ထိန်းကိုင်ထားပါတယ်။ ပြီးတော့မှ နဖူးကနေေ၇ထဲကို နောက်ပြန် ပက်လက်ကလေး နှစ်လိုက်ပါရော။ ကျွန်မထင်တာက ခေါင်းကို ကိုင်ပြီး ဒီအတိုင်း ဖိနှစ်တယ် ထင်တာကိုး။ အခုလို ဘုန်းကြီး နှစ်ခြင်းလုပ်ပုံဆိုေ၇တွေ နှာခေါင်းထဲ ၀င်မှာပဲ။ တယောက်ပြီးတယောက် နှစ်ခြင်းခံကြတာ အများကြီးပါပဲ။ တိုက်ရိုက် ၇ိုက်ကူးရေးရှိလို့ မိမိနှစ်ခြင်းခံတာကို ဗွီစီဒီခွေ လိုချင်ရင်လည်း ချက်ချင်းဝယ်လို့ရပါတယ်။ ကျွန်မလည်း စပ်စုချင်လို့ ရေထဲဆင်းကြည့်တော့ တော်တော်အေးပါလားလို့ သိလိုက်၇ပါတယ်။ အေးတာမှ ကျင်ခနဲကို ခံစားလိုက်ရတာ။ ခုနက နှစ်ခြင်းခံတဲ့သူတွေ တော်တော်အေးမှာပါလားလို့ တွေးလိုက်မိတယ်။ ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးဆို လူအများကြီးဆိုတော့ အကြာကြီး။ ပြီးမှ မြစ်ကို သေသေချာချာ ကြည့်မှ မြစ်က ကျဉ်းပြီး တိမ်တယ်။ ပြီးတော့ မိုးဆိုတာ မရွာသလောက် ဒေသမို့ အခု နှစ်ခြင်းခံတဲ့ နေရာမှာ လူတရပ် ရေရှိအောင် အပေါ်ဖက်ရော အောက်ဖက်ပါ တမံတုတ်ထားတာ မြင်လိုက်၇တယ်။ နေရာအနှံ လျှောက်ကြည့်ပြီးတော့ ဓါတ်ပုံတွေ လျှောက်ရိုက် ပြီးတော့ အိမ်ပြန်လမ်းခရီးကို စလိုက်ပါတော့တယ်။
အန်တီမှီ ကောင်းမှုနဲ့နှစ်ချင်းခံခြင်းအကြောင်းနှင့် ၊ အစ္စရေးအကြောင်းကို လေ့လာသွားပါသည် ။
ဂျော်ဒန် ဂျော်ဒန်နဲ့ ကြားသာ ကြားဖူးရတာ…။ မမြင်ဖူး မသိဖူး…။ ခုမှပဲ….။ အရှင်လတ်လတ်မြင်လိုက်ရတော့တယ်…။ အွန်လိုင်းပေါ်က ကောင်မလေးတွေ ပြောသလိုပဲ …။” ကျေးကျေးပါ” မမှီရေ……..
ဂိုလန်ကုန်းပြင်မြင့်တဲ့ ………..စာအုပ်ထဲမှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စွန့်စားခန်းတွေဖတ်ဖူးတယ်။
မမှီတို့များ စနေမောင်မောင် တွေဘာတွေနဲ့တောင်တွေ့ချင်တွေ့အုန်းမှာ။
ဟုတ်တယ် ကိုသစ်မင်းရေ တကယ်ကို ထူးဆန်းတဲ့နေရာတွေပါ။ ခရီးသွားတိုင်း သိတဲ့သူက ပြောပြလို့ ကမ္ဘာပျက်၇င် ပထမဆုံးစပျက်မဲ့ နေရာလို့ ပညာရှင်တွေ ယူဆထားတဲ့ နေ၇ာဆိုပြီး တောင်ကုန်းလေး တကုန်းကို အမြဲ သတိတရ လှမ်းပြတယ်။ (၂၀၁၂) ရုပ်ရှင်ထဲမှာပါတယ်ပြောတယ်။ ကျွန်မတော့ မကြည့်ဖူးသေးဘူး။ အရမ်းဝေးလို့ ကင်မရာနဲ့ရိုက်လည်း ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မမှာ ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်လိုက်တာ။ နောက် ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ မဖြစ်မနေ သွားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပေမဲ့ အခုတော့ ကျန်းမာရေးကြောင့် သွားခွင့်မရတဲ့ နှစ်နေရာရှိတယ်။ မာဇားဒါးတောင်နဲ့ ဟိုလိုကော့မြူးဇီယမ်ကိုပါ။ မာဇာဒါးတောင်က ဒီလောက်မက်စောက်တဲ့ တောင်ပေါ်မှာ တက်ပုန်းနေပေမဲ့ အီဂျစ်က လာတိုက်လို့ ကလေးလူကြီး အကုန်ချောက်ထဲ ခုန်ချခဲ့တဲ့နေရာပါ။ တကယ့် သမိုင်းဝင် ရှေးကျတဲ့ လူတွေ နေထိုင်စားသောက်ခဲ့တဲ့ နေရာတွေကို သေသေချာချာ ထိမ်းသိမ်းထားတာတဲ့။ ဟိုလိုကော့ကတော့ ဟစ်တလာသတ်လို့ သေသွားတဲ့ ဂျုး (၆)သန်းအတွက် အထိမ်းအမှတ်နေရာပါ။ အထဲကို ၀င်သွားရင် သေသွားတဲ့ လူတွေ နံမည်ကို တဦးခြင်းစီ အဆက်မပြတ် ခေါ်ပေးနေတာတဲ့။ အခုတော့ေ၇ာက်နိုင်တော့မယ် မထင်တော့ပါဘူး။
နေကတော့ ကောင်းနေပါပြီ မကြာခင် ပြန်တော့မှာမို့ ပြန်ရောက်ရင် ရွာထဲက လာနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် အခုတလော ရေးစရာတွေ အပြတ်ရေးနေတာပါ။
နှစ်ခြင်းခံတာကို အခုမှပဲ မြင်ဖူးတာ .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …
ကမ္ဘာကြီးက ထူးဆန်းတယ်နော် ….
ဒီရွာထဲလာရတာ ကမ္ဘာထဲ လျှောက်လည်နေရသလိုပဲ …
မhmee ပို့ပေးတဲ့ နေရာလေးတွေက ကျွန်တော်တို့ ရောက်ရဖို့ လွန်ခက်သမို့ အားရကျေနပ်နေပါတယ်။
ဂါဂါလီရေပြင်မှာ ဂျူးကိုကိုကြီးများ အော်မေ့ဂိုဏ်းအဖွဲ့ဝင်များနဲ့ နဖူးတိုက် ဒူးတိုက် ဆွေးနွေးချင်လို့ စောင့်နေကြပါသတဲ့။ စပွန်ဆာကတော့ အန်တီမှီဖြစ်ပါဒယ်။ အမြန်ဆက်သွယ်ဂျဘာ….
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမမှီ ဒါပေမယ့် ငှက်ပျောစိုက်ခင်းနဲ. ပြတ်ရွေ.တောင်ကျောလေး ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ရမှာ ကြည့်ချင်လို.
နှစ်ခြင်းခံရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လေးများသိခဲ့လား မမမှီ …. သိရင်ပြောပြပေးပါအုံး..
@ Shwe Tike Soeေ၇ ပြတ်ရွေ့ကတော့ ကားကသွားနေတာမို့ ရိုက်ခွင့်မသာခဲ့ပါဘူး။ လမ်းကလည်း အန္တာရာယ်အတော်များလို့ ကားရပ်ခွင့်မပေးဘူးလေ။ ဌက်ပျောခင်းတွေတော့ သတ်သတ်သွားပြီးကို ၇ိုက်ခဲ့တယ်။ နောက်မှ စိုက်ပျိုးရေးအကြောင်းတင်မှ တင်ပေးပါ့မယ်။ ဓါတ်ပုံတွေထဲက (၆) ပုံမြောက်ပုံထဲက စာက နှစ်ခြင်းခံခြင်း အကြောင်းပါ။ ဗဟုသုတရအောင် သေချာအနီးကပ်ရိုက်ခဲ့တာ။ ဘာသာပြန်ကြည့်ပါနော့။
ခရစ္စမတ် အကြိုကာလ နဲ့ အံကိုက်ပါပဲ အန်တီမှီရေ။
ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် လက်လှမ်းမီရာ အကုန်သာ မှတ်တမ်းတင်ထားပါဗျို့။
ပရိသတ် အခိုင်အမာ ရှိပါကြောင်း။
ဘာကြောင့် နှစ်ချင်း ခံရတယ် ၊ နှစ်လိုက်တယ် အချိန် ဘယ်လို ခံစားရတယ် ဆိုတာလေး သိတဲ့သူ ပြောရင် ကောင်းမယ် ၊ တကယ် စိတ်ဝင်စားလို့ပါ
မမှီ ကျေးဇူးနဲ့ ရောက်ဘို့ ခက်ခဲတဲ့ နေရာအကြောင်းလဲ သိရ ပုံလေးတွေ မြင်ရနဲ့ ၊ အမြဲ စောင့်ဖတ်နေပါတယ်
ဆရာသစ် မှန်းရင် လွဲခဲတယ်နော ၊
ဟိုတစ်ရက်က ခရစ်ယာန်မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က အစ္စရေးက ရေရူခရစ်တော် နှစ်ခြင်းခံတဲ့ နေရာကို သွားချင်တယ်လို့ပြောနေတာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မမှီတင်လိုက်တဲ့ပို့စ်ကိုတွေ့တော့ သူငယ်ချင်းကို ပြလိုက်ဦးမယ်၊ ကျေးကျေး……..
ကိုနိုဇိုမီေ၇ေ၇ထဲနှစ်ပြီး ပြန်အထမှာ ကောင်းကင်တံခါး ပွင့်လာပြီး ဘုရင်းသခင်ကို ဂျိုးဖြူဌက်ပုံ တွေရတယ်ဆိုလားပဲ။ ကျွန်မလည်း သိပ်မသိဘူး။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် သူငယ်ချင်းကို မေးတော့ နှစ်ခြင်းခံရင် မြင်ရပြီလားမေးတယ်ပြောတယ် မမြင်ရမခြင်း နှစ်ခြင်းခံပေးတာတဲ့။ ကျွန်မက စလိုက်ပါသေးတယ် အဲ့ဒါဆို ရေမွှန်းတော့ မမြင်လည်း မြင်တယ်ပြောမှာပေါ့ဟ ပြောလို့ စိတ်ဆိုးသွားတယ်လေ။ ကိုယ်ယုံကြည်နဲ့ကိုယ်မို့ အံ့သြစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။
superေ၇ ကျွန်မသူငယ်ချင်း ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ကို ဒီဓါတ်ပုံတွေ ပို့ပေးတော့ သူ့ခမျာ ၀မ်းသာလွန်းလို့။ သူတို့ အတွက်ကတော့ အထွဋ်အမြတ်ကိုး။
စာအုပ်ထဲမှာပဲဖတ်ဘူးတာ၊သူများစကားငှားသုံးရမယ်ဆိုရင် အရှင်လတ်လတ် တွေ့လိုက်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ၊ ဒါပေမဲ့.၊ ဘာကြောင့်နှစ်တယ်၊ အနှစ်ခံတယ်ဆိုတာလေး သိရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲဗျာ..
မမှီရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် မြင်ခဲလှတဲ့နေရာတွေကို အရောက်ပို့ပေးတဲ့အတွက်ပါ
သူတို့တွေရဲ့ ဘာသာရေး ယုံကြည်မှုက လည်း သူဟာနဲ့ သူထူးခြားလှပါတယ်..
အစက သိပ်နားမလည်ပါဘူး.. ဒါပေမဲ့ ခုနောက်ပိုင်း ကြည့်ဖြစ်တဲ့ ရုပ်ရှင်တချို့ က ဖြစ်ရပ်မှန်ပေါ် အခြေခံပြီး ရိုက်တာဆိုတော့လေ သူတို့ တွေကို နည်း နည်းပါးပါး နားလည် လာသလိုပါပဲ
လူဆိုတာကလည်း ကိုယ့်ယုံကြည်မှုနဲ့ ကိုယ်ပေါ့နော်..
The Rite ဆိုတဲ့ကားလည်း ထူးခြားတယ်
Sympathy for Delicious ဆိုတဲ့ကားကလည်း အတော်လေး ကောင်းတယ် ( သူတို့ ရဲ့ ဘာသာရေးယုံကြည်မှုကို ပြထားတာ) ဗဟုသုတပေါ့
ရေနှစ်တဲ့… နှစ်ခြင်းခံတဲ့ အယူဝါဒကို ခုထိလေ့လာနေတုန်းပဲ။
ဦးစန်းလွင်ရေးတဲ့ စာအုပ်ဖတ်တယ်… သိပ်မရှင်းသေးဘူး…
လောလောဆယ်တော့ မမှီတင်ပေးလိုက်တဲ့ ပုံတွေကြည့်ရင်း
မမှီရေ ဖတ်ရတာကော ပုံတွေကြည့်ရတာကောအရမ်းဗဟုသုတရတာဘဲ
အခုလိုမမှီရေးပြ ပြောပြတော့လဲ အသိတိုးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်